Raha mikaroka ny orinasa SEO sy analytement tsara ianao, dia tonga amin'ny toerana mety. Miaraka amin'ny mpampiasa 636.471 mahery sy tranokala nohalalinina 1 472,583, dia nanome fahafaham-po ireo mpanjifany amin'ny tsipika hosoratana i Semalt. Fa ho an'ireo mpamaky mbola tsy azontsika ny dikan'ny SEO sy ny famakafakana tranonkala dia tokony mifikitra ihany ianao.
Tongasoa eto amin'ny Semalt, tranonkala SEO sy analytics. Tsy orinasa Mickey Mouse mahazatra izahay izay mikendry ny hihena miaraka amin'ny vola efa sarotra. Fa kosa, masoivoho nomerika feno isika. Azonao atao ihany koa ny mihaona amin'ny ekipantsika manana traikefa sy matihanina.
Ny mpikambana ao amin'ny ekipanay dia manam-pahaizana SEO sy web analystana izay vonona hatrany hanatrika ny zavatra rehetra ilainao. Tokony hahatsiaro hihaona amin'izy ireo ianao ary hiresaka amin'izy ireo. Mpiasa manan-talenta sy mahomby ary marisika izay manana tetik'asa IT maro ao amin'ny portfolio-ny. Tokony hihaona koa amin'ny turbo, ny famantarana Semalt, ary ny fiompiana mpiasan'ny sokay izahay.
Raha mbola manontany tena ianao hoe inona marina no ataontsika dia indro ny fanazavana.
Semalt dia manolotra serivisy tranonkala SEO sy analytic hanampiana hiteraka sy hitarika ny mpanjifanay. Mandeha lavitra isika amin'ny famakafakana tranonkala ary miantoka fa hiova ho mpanjifa ireo làlana ireo. Eny, manampy anao hahazo vola izahay amin'ny fisarihana ny mpanjifa amin'ny orinasanao amin'ny fampiasana Internet.
Amin'ny marketing amin'ny Internet, ireo mpanjifa izay nandray soa tamin'ny fampiasana SEO dia mazàna mamoaka fanambarana toa ny vato SEO !!! Ary izao no antony
Ny fahafantarana ny maha-zava-dehibe ny SEO sy Web Analytics
Ny SEO dia mitoetra ho an'ny milina fikarohana. Ity no fomba voajanahary hahazoana ny votoatin'ny tranonkalanao voasariky ny Google. Imbetsaka, mpampiasa no mamoaka na mamoaka votoaty amin'ny Internet raha tsy mahazo ny fomba fiasa. Alaivo an-tsaina izany toerana tsenan'ireo mpampiasa mihoatra ny 4 miliara sy tranokala 1.500 tapitrisa. Eny, tsy ny tranokala rehetra no manolotra serivisy mitovy, saingy tsy misy miavaka ihany koa. Na inona na inona tianao atao, dia misy tranonkala iray manolotra zavatra mitovy. Noho izany, mba hiantohana ny vokatrao dia mampiasa SEO izahay.
Fantatrao ny fomba andehananao any amin'ny Google indraindray hitady vokatra na lohahevitra iray, fa mahazo pejy valinteny ianao? Azoko antoka fa manana ianao, tsy mila mamaly izany ianao.
Na izany aza, ny Google dia mandamina ny valin'ny fikarohana nataonao amin'ny filaharana manokana. Ankehitriny, tsy vintana izany, fa vokatry ny SEO izany. Ny ankamaroan'ny olona izay mampiasa ny Internet amin'izao fotoana izao dia mahita ny valin'ny fanontaniana napetrany amin'ireo valim-pikarohana dimy voalohany naseho. Midika izany fa ny mpampiasa internet zara raha mitsidika ny vokatra 5-7 hafa amin'ny pejy voalohany. Avy eo, eritrereto ny valin'ny fikarohana eo amin'ny pejy faharoa, na ny fahatelo. Efa nitady zavatra ve ianao ary mila mandeha amin'ilay pejy fahatelo? Mampiseho izany fa ilaina ny fampiasana tena SEO mahomby.
Amin'ny maha tompona orinasa na tranonkala anao, te hiteraka fifamoivoizana faran'izay betsaka ianao satria tsotra fotsiny ny bokotra mety hihoatra ny vola (marina). Ka rehefa miseho ny tranokalanao na ny serivisinao amin'ireo valim-pikarohana telo voalohany, dia hainao fa sarotra be izany. Izany no antony ilainao anay.
Ataon'i Semalt eo an-tampon'ny rojo sakafo ianao, fa hitanao aloha. Mba hanaovana an'izany, ataontsika ny teny fanalahidy sy famakafakana an-tranonkala be dia be. Na dia ny teny fanalahidy aza dia teny majika amin'ny Internet, dia mbola mila fitantanana tranonkala ho an'ny mpampiasa mba tsindrio, hamaky, na handahatra. Ireo antony ireo dia manampy ny Google, sy ny milina fikarohana hafa hahita haingana ny votoatinao raha misy mpampiasa iray mikaroka izay rehetra mifandraika aminao.
Noho izany, raha mitady mpampiasa hividy kiraro ny mpampiasa iray dia hikaroka avy hatrany ny teny amin'ny tranokala ny Google, fa raha tsy misy tranonkala mety dia tsy hanahirana ny miantsena amin'ny tranokalanao ny mpampiasa.
Ity misy lisitry ny serivisy natolotr'i Semalt
Ity karazana SEO ity dia manome antoka vokatra lehibe mandritra ny fotoana fohy. Ity fonosana SEO ity dia tena fonosana feno feno amin'ny orinasanao amin'ny Internet.
Mampitombo ny fahitan'ny tranonkalanao izany
Mahazo optimization amin'ny pejy ianao
Manome tranobe rohy izahay
Fanadihadihana famaritana teny fanalahidy
Ny famoronana tranonkala mahavariana dia tsy ny ilaina ihany no hiteraka fifamoivoizana. Raha tsy ampy ny fahalalana ny fomba hitondranao azy ho amin'ny toerana ambony any Google, dia sarotra izany. Ho an'ny $ 0.99 fotsiny ny vidin'ny vidiny, manomboka fanentanana SEO ianao izay manome tombony ho anao. Na dia teo am-panombohan'ny fikarohana optimization aza, omenay aminao izay rehetra ilainao mba hampiroboroboana ny tranokalanao amin'ny Internet. Manome fidirana amin'ity andiam-teknika satroka fotsy satroka fotsy ho an'ny tetikasanao ity izahay. Na, afaka manolotra traikefa amin'ny mpanjifanao tsara kokoa ianao amin'ny alàlan'ny serivisy SEO miainga amin'ny teknolojia tokana ananantsika. Avelao hiasa ho anao ny Auto SEO mora sy manome vokatra haingana sy mahomby 100%.
Iza no atolotra an'izany?
Ny Auto SEO dia mety hahasoa amin'ny tranokala web, ny orinasa kely na ny fanombohana, orinasa, ary freelancer.
Teknika SEO mandroso no natao indrindra hahombiazan'ny orinasanao. Izany dia mamela anao ho eo an-tampon'ny Google.
Ity fonosana ity dia manolotra:
Fanohanana sy consulting
Tanjona amin'ny raharaham-barotra rehetra no tokony ho tsara indrindra. Alao sary an-tsaina ny fisehoan'ny orinasanao amin'ny lisitra orinasa lehibe indrindra Forbes. Aza manao tsinontsinona ny eritreritra; azo atao miaraka amin'ireo zavatra telo lehibe varotra, tombony ary fiaraha-miasa. Ireto fitaovana telo lehibe ireto dia izay ahafahanao mivelona ao amin'ny tontolon'ny orinasa.
FullSEO dia hanampy anao hampifangaro ireo loko telo rehetra, hanome lohany anao ho amin'ny fanambinana. Ny ekipanay SEO manam-pahaizana manokana dia mamolavola sy mametraka drafitra tsirairay momba ny fanatsarana ny milina fikarohana sy fampiroboroboana tranonkala mifanaraka amin'ny filan'ny orinasanao. Noho ny fanampiana ataonay, ny tranokalan'ny orinasanao dia tsy vitan'ny pejy voalohany fotsiny fa eo amin'ny toerana ambony amin'ny fikarohan'i Google. Isaky ny mitady ny vokatra mitovy amin'ny zavatra atolotrao ny olona, dia entinay any amin'ny tranonkalanao izy ireo.
Iza no mahazo tombony amin'ny Semalt FullSEO?
Raha ny fonosana FullSEO dia natao indrindra ho an'ny tetik'asa sy e-varotra, dia mahasoa ihany koa ny manomboka tompona sy webmaster ary koa ireo mpandraharaha maniry ny hampiasa ny tranokalany.
Izahay dia manadihady ny tranonkalanao ary alao amin'ny top 10 Google ambony indrindra amin'ny fotoana fohy indrindra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny laharam-pitenenana sy fehizoro amin'ny teny Semalt, dia mijanona tsy maharitra ianao.
Manome serivisy toy ny:
Famoahana ny fahitana ny tranonkalanao eo amin'ny tranonkala
Hikaroka ny tranokala mifaninana
Fantaro ireo lesoka fanatsarana pejy
Mahazoa tatitra momba ny laharan'ny tranokala.
Efa niezaka ny hahatratra ny tampony ve ianao, saingy tsy mandeha io? Tsy mahita ny tranonkalanao ny mpihaino kendrena anao? Makà valiny amin'ireto fanontaniana ireto amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranonkala tranonkala maimaim-poana an'ny tranonkala Semalt ho an'ny famakafakana sy ny fandinihanao ny tranonkalanao. Ny kaonty momba ny teny fanalahidy momba ny tranonkala an-tserasera ihany koa dia mampiseho ny toerana misy ny tranonkalanao amin'ny Google SERPs. Aorian'izany dia manome soso-kevitra mety hahasarika ny mpihaino kendrena anao izahay. Fantaro izay tadiavin'ny olona betsaka indrindra ary ambarao izay zavatra ilainy. Amin'ny fanaraha-maso ny fifaninanana ataonay dia aharihary ny tsiambaratelony ho amin'ny fahombiazana. Aorian'izany dia manova sy mampiasa an'io fahalalana vaovao ho an'ny fampiroboroboana an-tserasera io izahay.
Farany, mamorona tatitra an-tranonkala amin'ny antsipirihany izahay ary manampy amin'ny fanitsiana ireo lesoka hitantsika. Amin'ny maha gurus web, manampy anao izahay sy ny tranonkalanao manankarena.
Iza no mahazo tombony amin'ny Semalt Web Analytics?
Manoro hevitra izany ho an'ny olona rehetra izay te hahazo betsaka amin'ny tranonkalany aho. Webmaster, tompona orinasa kely, orinasa, fanombohana ary freelancer afaka mampiasa ity serivisy ity koa.
Namorona tranonkala mahavariana ho an'ny indostria sy ny mpampiasa izahay. Ny tranonkala noforoninay dia mety ho lasa HQ nomerika ho an'ny zavatra rehetra an-tserasera, manomboka amin'ny orinasan-tserasera, orinasa tsy miankina, ary fivarotana, na studio ho an'ny mpamorona, mpanakanto, mpampiasa iray hafa izay manana hevitra mahagaga ilainy amin'ny Internet. Azonao atao ny miantehitra amin'ny serivisy matihanina mba hahazoana ny sainao mendrika.
Ny fisehon'ny tranonkalanao dia milaza be momba ny vokatrao. Ny sary sy ny loko ary ny famolavolana dia zava-dehibe amin'ny fitaovanao amin'ny tena fiainana. Ny tranonkala mahaliana dia mety ho antony mamaritra hoe iza no mijanona hijery ny atin'ny tranonkalanao.
Ny fandaharan'asa fampandrosoana amin'ny tranonkala dia manolotra:
Ny famolavolana mahasarika sy ilaina
Fametrahana vahaolana amin'ny CMS
Fampidirana lozisialy fanoratana sy API
Fanohanana sy fikojakojana
Iza no mahazo tombony amin'ny drafi-pivoarana tranonkala Semalt?
Webmaster, tompona orinasa kely, orinasa, fanombohana ary freelancer tokony hahatsapa malalaka amin'ny fisavana an'io.
Raiso zavatra madinidinika ary mampiavaka azy ireo. Izahay dia manome ny hevitrao, ny fiainana, ny sainao ary ny ataonao.
Mamolavola ny hevitrao izahay
Avoahy ny script
Ampiasao ny fonon'ny feo matihanina
Aza milaza amin'ny mpijery fotsiny izay atolotrao, asehoy izany. Mba ho mialoha ny fifaninanana dia mila mieritreritra any ivelan'ny boaty ianao. Manaova zavatra lehibe lavitra noho izay heverin'ny mpifaninana aminao. Amin'ny fanampiana anay, hanana horonan-tsary miara-miasa mahafinaritra ianao izay tsy isalasalana fa hampiaiky ny mpanjifanao ho lasa mpanjifa. Lazao anay ny hevitrao ary tazomy izahay hanova izany amin'ny horonan-tsary mampiroborobo azafady aparitanao mba hampody ny tsindry anao amin'ny mpanjifa. Manome fomba mahaliana hampitana ny serivisy ireo horonan-tsary. Nilaza zavatra betsaka kokoa ianao nandritra ny fe-potoana fohy kokoa ary avelao izy ireo hahatadidy ny marikao rehefa mizara ireo horonantsary miaraka amin'ny namany ianao. Mahazo mankafy ny fivarotana maimaim-poana ianao noho ireo horonantsary mamaritra ny kalitao.
Indray andro dia tonga tamiko ny hoe inona no nanampy ny orinasanay miasa ho an'ny hafa. Manampy anao izahay hamorona marika, ary ampiroboroboana ao amin'ny tranonkala izahay. Fantatsika fa tiantsika ny hanao ny ankamaroan'ny zavatra amin'ny tenantsika, fa ny asa sasany dia tokony avela ho an'ny matihanina. Avelao izahay hahazo valiny mahavariana amin'ny asanay. Rehefa manana traikefa an-taonany dia mahazo ny mofomamy tonga lafatra ianao nefa tsy nijaly ny olana natrehinay nanitsiana ny fomba fanarahana azy. Hanangana sy hanangana paikady ho an'ny fampiroboroboana ny tranokalanao amin'ny tranokala izahay.
Io no antsoinay ho serasera nomerika feno.
Afa-po foana ny mpanjifanay, ary tsara ny navelanay anay ny tantara mahavariana hoe ahoana ny tranonkalan'izy ireo, izay tsy nisy hita taloha, dia tafiditra ao anatin'ireo tranonkala ambony. Raha te hahita bebe kokoa ianao dia azo jerena eto ireo tranga ireo .
Misokatra ho an'ny rehetra i Semalt, na inona na inona fiteny hitenenanao. Hahita fiteny mahazatra aminao ny mpitantana anay. Rehefa dinihina tokoa, dia miteny anglisy lehibe tahaka ny anglisy, frantsay, italianina, tiorka, sy ny maro hafa.
Takatray fa mety ho be dia be ny fanatanterahana ny tanjonao. Saingy, noho ny fanampiantsika dia tsy voatery mitondra irery ianao irery. Ny manam-pahaizana anay dia manamora ny asa sarotra rehetra. Farany, ny tanjonay dia ny hiantoka fa tsy afa-po ihany ianao fa ny tranokalanao dia eo an-tampony.
Maninona raha misoratra anarana aminay anio ianao ary ho tafiditra ao anatin'ny ekipa mpitarika !!!